WAXYAABAHA KALA DUWAN EE TUFAAXA AMAZING: SIFOOYINKA IYO SIFOOYINKA UGU MUHIIMSAN, SAWIRRADA IYO MUUQAALADA KORITAANKA - BEERTA
Kala duwanaanta tufaaxa leh cinwaanka hadalka - Amazing
Waxyaabaha kala duwan ee Apple Weynaa oo lagu yaqaan sifooyinka macaamilka ee sarreeya.
Qiimaha ugu muhiimsan waa nolosha shafka dheer tufaaxa.
Kala duwan ayaa u adkaysata cudurrada fungal iyo ma aha mid si xamaasad leh u daryeela.
Sharaxaada kala duwan iyo sawirada maqaalkan.
Ammaantu waa noocyo kala duwan oo jiilaalka ah.
MUHIIM: Magaca labaad waa "Rossoshanskoe dhadhan fiican".
Dhirta Apple waa mid sarreeya adkaysi u ah qolofta iyo xagta oo budada ah.
Ka hortagga barafku waa dhexdhexaad.
Xaaladaha saxda ah, tufaaxa waa la keydin karaa ilaa 250 maalmood.
Xaaladaha kaydinta ee tufaaxa jiilaalka:
Sidoo kale inta lagu jiro xilliga jiilaalka ee geedaha tufaaxa waa inaad fiiro gaar ah siisaa: Rennet Chernenko, Cinnamon New, Snowdrop, Rozhdestvensky iyo Granny Smith.
Waa noocyo kala duwan oo is-kiniin ah geedo tufaax ah. Tani waxay ka dhigan tahay in pollinadu dhacdo sababtoo ah manka oo ah ubaxyo tufaax ah oo ah noocyo is-bacrin ah. Fikrad ahaan, jidadka dhirta ee laba nooc oo fogaan ah 5 mitir midba midka kale.
Rugaha ugu fiican: Rossoshansky lezhky, Abriil, Waqooyi Galbeed.
Sharaxaada kala duwan ee la yaab leh
Dhexdhexaad dhererka. Taajka guud, ma cufan, daboolka caleenta dabacsan.
Midabka jilicsan waa midab-bunni. Laamaha qalfoofka ah ee la xiriirta jirridda waxay ku dhowyihiin meel u dhow.
Fruiting on kolchatka. Jilif ee caleemaha waa brayish brayish. Lambarkoodu ma sarreeyo.
Burooyinka maadiga ah ayaa la riixay. Caleenta dhexdhexaad ah ayaa leh qaab muuqaal ah.
Cidhifyada caleemaha waa qoryaha, salka uu yahay mid ballaaran, midabkiisu waa cagaar madow. Taargada warqadda wax yar ayaa la googooyaa, is-waafajinta waa mid cufan. Inflorescence - dallad-qaabeeya. Tirada celceliska isku-dhafka. Midabka cayayaanka waa caddaan.
Dibadda waa mid soo jiidasho leh, Dhexdhexaad dhexdhexaad ah ama ka sarreeya. Mid ka mid ah geed ayaa koraa tufaaxa qiyaasta isku mid ah. Foomka ayaa ah mid heer sare ah, heer sare ah oo gaabis ah.
Tufaaxa calaamadaha. Midabka - cagaar iyo jaalle. Midabka daboolka badanaa badanaa waa maqan yahay ama wuxuu qabsadaa dusha yar oo leh casaanyo kala duwan oo casaan ah.
Si taxadar leh u ah tiro badan oo ah dhibco subcutaneous midabka cagaarka-brown. Peel adigoon dhoobo lahayn, oo aanad dhalaalin, laakiin si siman.
Wadnaha tufaaxu waa qiyaas dhexdhexaad ah. Jidhku waa caddaan yahay jilbil hurdi ah, macaan iyo dhanaan oo dhadhanka la dhadhamiya.
Waxyaabaha kiimikada ee tufaaxa Amazing:
Arrinta qallalan 14,7%
Cadaadiska titrated 0,80%
Noocyada soo socda ayaa sidoo kale ku kala duwan dhadhanka wanaagsan iyo faa'iidada gaarka ah: Orlinka, Moscow Winter, Young Physician, Kandil Orlovsky iyo Aromatny.
Noocyada kala duwan ee geedaha tufaaxa Raadinta saldhigga Rossoshansky ee tijaabada ah ayaa dhalatay kaddib marka la isku daro M.M. Ulyanischev laba nooc oo kale - Renet Simirenko iyo Mekintosh. Ku taxan diiwaanka gobolka ee gobolka Waqooyiga Caucasus sanadkii 1974.
Kordhinta iyo qaybinta gobolka
Aagga koritaanka dabiiciga ah waa Gobolka Rostov. Si sax ah - gobollada koonfureed ee Gobolka Chernozem.
Si kastaba ha noqotee, noocyada kala duwan ayaa lagu habeeyey gobollada kale ee qoraxdu. Haddii xaaladaha cimiladu aanay ku filnayn ku haboon, hubinta daryeel habboon, iyo in ka badan oo dhan, beerashada geed.
Dhirta geedaha iyo noocyada noocan oo kale ah ayaa aad u fiican in laga beerto gobolladan: Baraf Kalvil, Korey, Yandykovsky, Golden Delicious iyo Gala.
U yaab leh noocyada kala duwan ee tufaaxa tufaaxa.
Ka hor intaan koritaanku dhicin sida caadiga ah qiyaas ahaan 140 maalmood laga bilaabo dhammaadka ubax.
Ka hor inta aysan kufilan, tufaaxa ma googooyaan oo isku dhejin geed.
Geedka wuxuu bilaabmaa inuu midho dhasho lix sano ka dib markaad degto.
Geedka tufaaxa ah ayaa sannad walba soo goostay waana mid aad u muhiim ah. Horeyba ururinta ugu horreysa, geedku wuxuu keenaa ilaa 100 kiilo oo miro ah.
In aagga koritaanka dabiiciga ah Amazing waxay qaadataa 200 oo hektar hektar.
Noocyo Apple sida Antonovka caadiga ah, Aport, Shtriel, Aloe Early iyo Nastya waxay ku faani karaan dalagyo badan.
Markaad beerto geed iyadoo la isticmaalayo bacriminta caadiga ah. Daryeelka geedka tufaaxa ah maaha wax xamaasad ah.
Weynaa jiilaalka dambe nooc ka mid ah tufaax.
MUHIIM: Markaad beerto, iska ilaali meelaha meelaha biyuhu ku yaalaan meel u dhow dusha sare. Haddii kale, seedling wuxuu ku jiri doonaa biyaha, geedkuna wuu qudhmi doonaa.
Kala duwanaanta noocaan ah waa mid la jecleysan karo mid ka mid ah laba jeer: guga (dhammaadkii Abriil) iyo dayrta (dhammaadka Sebtembar - bilowgii Bishii 10aad).
Si kastaba ha ahaatee, darajadan waxaa lagu talinayaa dhammaan isku mid ah dayrta.
Waxaa fiican inaad iibsato geedo leh nidaamka xidid horumarinta.
Dooro Goobaha si fiican u da'ay si loo beerto noocyo kala duwan.
Waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo ciidda dhirta si ay geedka u koraan oo u keenaan dhalidda ugu badan.
Geedka dhirta ka fiican fogaan ah 2.5 m U hubso inaad geedka geedka ah si deg deg ah u dhaqso ka dib markaad beerto.
TALO: Haddii aadan heli karin ciidan sidan ah, waxaad god ku dhejin kartaa qoto dheer oo dhexdhexaad ah oo mitir ah, ka buuxi ciid, lakabyo dhoobo ah iyo godad jilicsan. Tani waxay abuuri doontaa xaalado xitaa ka wanaagsan ee biqilka ee geedo.
Sannadka soo socda ka dib markaad degto, guga, waa muhiim taajka foliar geedo tufaax ah.
U baahan in la jarjiro laan kasta. Iyo afarta ama shan sano ee hore Ha siin geedkii tufaaxa si ay u sameeyaan miraha.
Haddii ciidda ay bacrimiso, markaa tufaaxa cajiibka ahi waa ficil ahaan uma baahna bacrimin dheeraad ah. Cuncaddeeda hal mar ayaa quudinaysa.
Tani waxay u fiicantahay inaad isticmaasho:
isku dar ah walxaha raadinta (N, Se, B, P);
Bishii Abriil, waxaa lagama maarmaan ah in lagu waraabiyo geedaha leh isku dhafka ka ilaaliya cayayaanka.
Nidaamkan waa in la sameeyaa laba jeer: marka ay burooyinku bilaabaan inay bararaan laanta iyo ka hor intaan la gooyeen.
Markaa geedka dambe uma baahna in la bacrimiyo muddo sannad ah. Apple Xagaa Amaan ah dhab ahaantii uma baahnid biyo. Sidaa darteed Waraabin badan oo macquul ah ma aha in la.
Noocyada dhirta geedka tufaaxa ah waxaa loola jeedaa aad u adkaysi u ah qolof. Si kastaba ha noqotee, waxaa weli ku xiran weerarada cayayaanka iyo bilowga cudurada kala duwan.
Waxaa muhiim ah in aysan ahayn kaliya jirridda lafteeda oo ay saameysay, laakiin sidoo kale goosashada oo dhan. Miraha waxay ku imaan karaan liis dhamaystiran oo khaladaad ah.
Tilmaamaha qolofta waa in ay inta badan saameeyaan caleemaha geedka, ka dibna u guurto midhaha.
Gadaal ayaa u muuqda mid caafimaad qaba.
Si looga badbaado waxyeello, waxaa muhiim ah in laga gooyo geedka tufaaxa dalagyada kale ee beerta, si taxaddar leh uula socdo warshadda iyo si joogta ah u fuliyaan ka hortagga:
Inta badan, geedka tufaaxa kala duwan Isbedel Amazinges gadaal miro. Haddii uu cudurku soo weeraray geedka, calaamada ugu horeysa waxay noqonaysaa muuqaalka nabarrada (fungus) on jilif.
Waxay si weyn u saameeysaa jirridda geedka tufaaxa, laakiin waxtar uma leh miro.
Mushroom isla markiiba loo baahan yahay si loo nadiifiyoHaddii kale, joogitaanka joogtada ah ee fangaska ee cayayaanka ayaa soo saara xoog badan oo nafaqo iyo nafaqo oo geedka tufaaxu u baahan yahay jiritaanka caadiga ah.
Haddii midhuhu aanu weli noqon mid aad u adag, markaa waxaad isticmaali kartaa mindida beerta si joogto ah si aad u gooyso. Haddii fangaska uu si xun u dhufto geedka, wuxuu noqday mid aad u ballaaran oo adag, ka dibna ma samayn kartid adigoon lahayn.
Qoryaha caafimaadka qaba ayaa si dabiici ah u xanuunsanaya.
Waxaa lagama maarmaan ah in la burburiyo likaha oo xididdada ka soo baxa.
Haddii aan tan la sameynin waqti ka dib, fangasku mar kale ayaa la sameeyay isla meesha.
Ka dib markii ay ka saareen infekshanka, meesha ay korortay waxay u baahan tahay nadiifiyey.
Waxa ugu muhiimsan waa in gooyuhu xitaa, inta badan waxay u dhacdaa si loo sameeyo dhowr marar badan.
Daaweynta waa in lagu sameeyaa kiniiniga bakteeriyada, ka dibna waa in la rinjiyo aagga lagu daaweeyo rinjiga saliidda.
Haddii tani aysan dhicin, nabarka ayaa ugu dhakhsaha badan u noqon doona buulkoo noocyada kala duwan ee cayayaanka.
Fiiri fiidiyowga oo ku saabsan miisaanka tilmaanta iyo la dagaallama.
Ha illoobin iyo ka hortagga cayayaanka caamka ah ee cayayaanka sida silkworms, qoob-ka, miraha miraha ah, aboorka tufaaxa iyo baraha macdanta.
Noocyada tufaaxa ah ayaa caan ku ah macaamiisha sababtoo ah caabbinta fiican ee qolofta, dhalidda sarraysa iyo tayada miraha, nolol maalmeedka, iyo sidoo kale qiimaha nafaqada iyo nafleyda.